देहरादुनबाट विद्यार्थी फिर्ता गर्ने सहमति, अभिभावक भन्छन्–जानकारी छैन
१३ कात्तिक, काठमाडौं । दसैं टीकाका दिन देहरादुनमा निर्घात कुटिएका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई नेपाल फर्काउने सहमति भएको छ । हरिद्वारस्थित शाक्य एकेडेमी र नेपाली समाजका प्रतिनिधिहरूबीच बिहीबार एक हप्तामा विद्यार्थी फिर्ता गर्ने सहमति भएको हो । एकेडेमीका तर्फबाट प्रिन्सिपल छिरिङ छोदेनले...
कोरोनाकालमा विदेशबाट फर्किनेको संख्या १ लाख २५ हजार नजिक, कुन देशबाट कति नेपाली फर्किए ? (तथ्यांकसहित)
कोरोनाकालमा विदेशबाट हालसम्म झण्डै १ लाख २५ हजार नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । गत चैतमा कोरोना कहरका कारण सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाएपछि समस्यामा परेका नेपालीलाई ल्याउन चार्टर उडान गरिएको थियो भने हाल सीमित संख्यामा नियमित उडान समेत हुन थालेको...
१६ मिनेटमात्र कम सुत्दा पनि स्वास्थ्यमा पर्छ असर
कार्यालयमा राम्ररी काम गरेर दिन बित्छ र स्पष्ट दिमागका साथ काम गर्न सक्नुहुन्छ कि तनाव र व्याकुलताका कारण खराब दिन बिताउनुहुन्छ ? यी दुई परिस्थितिमा जम्मा १६ मिनेटको निद्राको अन्तर हुन्छ । वैज्ञानिकहरूको अध्ययनमा यही कुरा देखिएको छ । स्लीप...
राम्रो मसलका लागि व्यायाम गर्ने कुरा त सबैलाई थाहै छ । तर राम्रो निद्राका चाहिएमा पनि व्यायामले सहायता गर्छ भन्ने कुरा धेरैका लागि नौलो हुन सक्छ । निद्रामा ध्यान दिएन भने मांसपेशीको विकास हुन पाउँदैन । अधुरो निद्राले सम्पूर्ण स्वास्थ्यलाई...
कौन बनेगा करोडपतिमा जितेको पैसाले के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा सहभागीको जवाफले अमिताभ बच्चन भए चकित
कौन बनेगा करोडपतिमा एक सहभागीको जवाफले अमिताभ बच्चन चकित परेका छन् । मध्यप्रदेशको खण्डवा ग्राम पञ्चायतका सचिव सचिव कौशलेन्द्र सिंह तोमर कौन बनेगा करोडपतिमा सहभागी भएका थिए । कार्यक्रम शुरू गर्नुअघि अमिताभ बच्चनले सोधे– यो शोमा जितेको पैसाले तपाईं के...
कोरोना भ्याक्सिन बनाएको रुसमा लगातार बढ्दै केरोना संक्रमित
रुसी सरकारी अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ १७ हजार ७१७ जना कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् । यसअघि रुसमा एकैदिन १६ हजार २०२ जना सङ्क्रमित भएका थिए । रुसमा बिहीबारसम्म कुल सङ्क्रमितको संख्या १५ लाख ८१ हजार ६९३ पुगेको...
तेस्रो लिङ्गीको भूमिका देखिएका अक्षयको फिल्मको नाम किन बदलियो ?
बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको केही दिनमा रिलिज हुने फिल्म लक्ष्मी बमको नाम फेरिएको छ । अब यो फिल्मको नाम लक्ष्मी मात्र हुने भएको छ । यो फिल्ममा अक्षय तेस्रो लिङ्गीको भूमिकामा छन् । राघव लरेन्सले निर्देशन गरेको यो फिल्मले बिहीबार...
कश्मिरमा भाजपा नेताको गोली हानी हत्या
भारतको कश्मिरको कुलगाम जिल्लामा भाजपा युवा मोर्चाका महासचिव फिदा हुसेनमाथि गोली प्रहार भएको छ । घटनामा उनको मृत्यु भएको छ । अन्य एक घाइते भएका छन् । बिबिसीका अनुसार घाइते ती व्यक्तिको अवस्था पनि गम्भीर छ । यसबारे विस्तृत जानकारी...
भारतको देहरादुनस्थित शाक्य एकेडेमीमा अध्ययनरत् पाँच जना विद्यार्थी भागेर नेपाल-भारत सीमामा आइपुगेका छन्। दसैं-तिहारमा एकेडेमीले बिदा नदिएपछि उनीहरू भागेर कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका आइपुगेका हुन्। बिहीबार मध्यान्ह १२ बजेतिर उनीहरू नाकामा आइपुगेको प्रहरीले जनाएको छ। पाँच जना विद्यार्थीमध्ये नेपालका २ र भारतका...
फ्रान्स घटनाः मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्रीको एकपछि अर्को भड्काउ ट्विट
फ्रान्सको निस सहरमा बिहीबार भएको चक्कु आक्रमणबारे अब विश्वभरका नेताहरुले प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । विभिन्न देशका नेताहरुले यो घटनाको निन्दा गरेका छन् । तर, मलेसियाका पूर्वप्रधानमनत्री महाथिर मोहम्मदको बयान अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको छ । ९५ वर्षका महाथिरले...
रुसमा कोरोनाभाइरसबाट दैनिक सङ्क्रमितहरुको संख्यामा बृद्धि हुदै गइरहेको छ । सरकारी अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा रुसमा १७ हजार ७१७ जना कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् । यसअघि रुसमा एकैदिन १६ हजार २०२ जना सङ्क्रमित भएका थिए । रुसमा बिहीबारसम्म...
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले लागुऔषध मुद्दाका एक प्रतिवादीलाई आज पक्राउ गरेको छ । गत वर्ष पुस २२ गते जिल्ला अदालत बागलुङले कैद र जरिवाना सजायँ सुनाएका बागलुङ नगरपालिका वडा नं २ का ३४ वर्षीय सन्तोष भनिने एडिसन बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको...
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको कञ्चनपुर जिल्ला पार्टी कार्यालय सचिव २७ वर्षीय शङ्करसिंह महरालाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ । भीमदत्त नगरपालिका १८ गोबरैया क्षेत्रबाट महरालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक अमरबहादुर थापाले बताए । बैतडी कटौजपानी गाँउपालिका...
बैङ्कको एटिएम मेशिन तोडफोड गर्न खोज्ने युवक पक्राउ, लागुऔषधसमेत बरामद
तनहुँको दमौलीस्थित एक बैङ्कको एटिएम मेशिन तोडफोड गर्न खोज्ने युवक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा पर्सा सुगौली गाउँपालिका–२ घर बताउने १९ वर्षीय किरण बानियाँ छन् । व्यास नगरपालिका–४ ट्राफिक चोकस्थित राजमार्ग सडक किनारामा रहेको बैङ्कको एटिएम मेशिन तोडफोड...
हतियार र लागुऔषधसहित दुई युवक पक्राउ
कटुवा पेस्तोल र प्रतिबन्धित लागुऔषधसहित सिरहा प्रहरीले आज दुई युवकलाई पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय बन्दीपुर सिरहाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले कर्जन्हा नगरपालिका २ बन्दीपुरबजारबाट कटुवा पेस्तोल र लागुऔषधसहित स्थानीय २२ वर्षीय डिम्पल यादव र २२ वर्षीय प्रेमनाथ यादवलाई...
'मिडियाको निगरानीपूर्ण आँखाले सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न मद्दत'
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्री पौडेलले लोकतन्त्रमा मिडियालाई चौथो अङ्गका रुपमा लिइने भएकाले सरकारका गतिविधिलाई निरन्तर नियालेर सुझाव र आलोचना दिन आग्रह गरेका छन् । उनले मिडियाको निगरानीपूर्ण आँखाले सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न मद्दत गर्ने धारणा व्यक्त गर्दै मिडिया र...
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई कोरोना संक्रमण भएको छ। टाउको दुखेपछि उनले पिसीआर परीक्षणका लागि स्वाब दिएकोमा रिपोर्ट आज पोजेटिभ आएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार सिडिओ दाहाललाई कोरोना देखिएको हो। दाहालले आफू र श्रीमतीमा कोरोना संक्रमण...
र्‍याप हान्ने काम भिटेनको, उखानटुक्का हान्ने काम केपी ओलीको !
हात्ती दुब्लाएर बोरामा अट्दैन, मुसो मोटाएर हात्ती हुँदैन जस्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका उखान टुक्काहरू त सुन्नुभएकै होला । गोरु नांगो देख्दा मलाई अहिलेसम्म लाज लागेको छैन भन्ने उहाँ नै हो । यो त राजनीतिक अश्लीलता हो । एकपटक ओलीले...
काठमाडौँको चन्द्रागिरि र ललितपुरको गोदावरीमा दुई जना मृत फेला
काठमाडौँको चन्द्रागिरि र ललितपुरको गोदावरीमा आज दुई जना मृत फेला परेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार चन्द्रागिरि नगरपालिका १५ ढुङ्गेअड्डा खड्कुले खोला पुलमुनी ओखलढुङ्गा सिस्नेरी गाउँपालिका २ का ३६ वर्षीय माईला भन्ने गणेश नेपाली मृत फेला परेका...
वीरगञ्जका नेकपा नेताको वयान : मुकेश चौरसियाको हत्या कसरी भयो ?
कात्तिक ६ गतेको घटना हो- पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कोसपथ ग्रहण कार्यक्रम थियो । कार्यक्रमभन्दा धेरै पहिले को अध्यक्ष, को सचिव भन्ने टुङगिसकेको थियो । साविक एमालेबाट अध्यक्ष विक्रम चौरसिया र साविक पूर्वमाओवादीबाट सचिव स्व. मुकेश चौरसिया...
बाँकेमा एक संक्रमितको मृत्यु, गण्डकीमा १०२ जनामा संक्रमण पुष्टि
बाँकेमा एक कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ । दाङ राप्ती गाउँपालिका १ का ६५ वर्षीय पुरुषको आज दिउँसो कोहलपुर शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको स्रोत व्यक्ति नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । लामो समयदेखि मधुमेहका बिरामी उनमा कात्तिक १० गते...